Uri kutsvaga nzira yekuenda nayo disable IPv6 kubatana pa Ubuntu yako? Muchikamu chino, ini ndichakudzidzisa kunyatsozviita uye kuti nei uchifunga izvi. Ini ndichakuratidzawo kuti ungaita sei kubvumira kana kubvumira zvakare IPv6 kana iwe ukachinja pfungwa yako.
Chii icho IPv6 uye nei uchida kudzivisa IPv6 kuUbuntu?
Internet Protocol version 6 (IPv6) ndiyo inonyanya kubudiswa yeIndaneti Protocol (IP), iyo protocol yekutumira inopa chiziviso uye nzvimbo yekombiyuta pamakombiyuta uye nzira dzomugwagwa paIndaneti. Yakave yakagadzirwa mu 1998 kuti ishandise iyo IPv4 protocol.
IPv6 chinangwa chekuvandudza kuchengeteka nekushanda, asiwo kuve nechokwadi kuti hatisi kukwanisa kutora maateresi. Inopa mazita akasiyana-siyana munyika yose kune imwe svondo, ichiachengetedza 128-bits, zvichienzaniswa ne32-bits chete inoshandiswa nePv4.
Dzvitsa IPv6 Ubuntu
Kunyange zvazvo chinangwa chacho kuti IPv4 ishandiswe nePv6, kuchine nzira yakareba yekuenda nayo. Pasi pane 30% yezviwani paIndaneti inoita IPv6 kuwanika kuwanikwa kune vashandisi (yakawanikwa neGoogle pano). IPv6 inogona kukonzerawo zvinetso nezvimwe zvikwata panguva.
kubva VPNs inopa hurumende yese, iyo iyo IPv6 inoshandisa pasi rose nzira dzakatarisa (inonyanya kupiwa) uye kuti ipapo (achiripo) iIPs dzisingapa IPv6 kutsigira shizha ichi chinhu chinoderedza pasi pekutanga pezita ravo. Nenzira iyi, vanogona kutarisa pane zvinokosha zvikuru kune vashandi veVPN: kuchengeteka.
Chimwe chikonzero chinogona kuitika iwe unogona kuvhara IPv6 pamutambo wako haisi kuda kuzviratidza kune zvimwe zvinopisidzira. Kunyange zvazvo IPv6 pachayo yakachengeteka kupfuura IPv4, njodzi dzandiri kureva ndeyezvimwe zvinhu. Kana iwe usingashandisi kushandisa IPv6 uye zvayo, kuva nePv6 yakakusiya inokusiya iwe uchinetseka kuhondo dzakasiyana-siyana, kupa hurumende chimwe chinhu chinogona kushandiswa.
Panyaya imwecheteyo, kugadzirisa mitemo yemitambo yakakwana haikwani. Iwe unofanirwa kubhadhara mukana wakafanana wekucherechedza iwe pikicha yako yePv6 sezvaunoita ye IPv4. Izvi zvinogona kuratidzika kunge zvakaoma kutadza (uyewo kuchengeta). Ne IPv6 inouya boka rematambudziko akasiyana neaya ePv4 (akawanda ayo anogona kutaurwa paIndaneti, achipiwa makore emutemo uyu), achipa hurongwa hwako rumwe rutivi rwekuoma.
Zvinyorwa zvingaverengerwa Kuti Ungavandudza Sei Linux Kernel Mu Ubuntu Uye Linux Mint
Kurega IPv6 kuUbuntu [For Advanced Users Only]
Muchikamu chino, ndichave ndichifukidzira kuti unogona sei kudzivirira IPv6 protocol pa Ubuntu yako. Vhura sendiri (default: CTRL + ALT + T) uye ngatitorei!
Cherechedza: Pamusoro pemirairo yakawanda iwe uri kuisa mune iyo terminal iwe unenge uchitsvaga ropafadzo dzemidzi (sudo).
Kana iwe uri wekodhi yemuchina weVashandi veLuxux uye uchisarudza kugadzirisa kushanda yakagadzikana, tapota vhura izvi zvidzidzo. Izvi ndezvevashandi vepamusoro vanoziva zvavanoita uye nei vachiri kuita kudaro.
1. Dzvitsa IPv6 uchishandisa Sysctl
Chokutanga pane zvose, unogona cheki kana une IPv6 yakagadziridzwa ne:
Unofanirwa kuona kero ye IPV6 kana ikabvumirwa (zita rekadhi yako yekambani inogona kunge yakasiyana):
Wakaona murairo we sysctl mumudzidzisi pamusoro kutangazve network in Ubuntu. Tichazoshandisa iko pano zvakare. To disable IPv6 iwe chete unofanira kuisa 3 mirairo:
Unogona kutarisa kana yakashanda uchishandisa:
Iwe haufaniri kuona kwete IPv6 kupinda:
Zvisinei, izvi chete inokonzera Pv6 kwekanguva. Nguva inotevera purogiramu yako yebhokisi, IPv6 ichagoneswa zvakare.
Imwe nzira yekuita sarudzo iyi inopfuurira inoshandura /etc/sysctl.conf. Ini ndichange ndichishandisa vim kuti ndigadzire faira, asi iwe unogona kushandisa chero mhariri waunoda. Iva nechokwadi chokuti une kodzero dzemutongi (shandisa sudo):
Wedzera mitsara inotevera kune faira:
Nokuda kwezvirongwa kuti zviitwe kushandiswa:
Kana IPv6 ichiri kubvumira mushure mekugadzirisazve, iwe unofanira kuumba (nemidziyo mizu) faira /etc/rc.local uye uzadze ne:
Zvino shandisa chmod command kuita kuti faira ishandiswe:
Zvichaitwa izvi kuverenga manheru (panguva yebhoti) mazamu emagetsi kubva ku sysctl yako yekufaira faira.
Mazano ekuverenga Mazano Akanakisisa Kukutarisa Mifananidzo Mavara e Ubuntu
2. Dzvitsa IPv6 uchishandisa GRUB
Imwe nzira ndeyekugadzirisa GRUB kudarika mapirameter panguva yekubvisa nguva. Iwe uchafanirwa kuchinja / etc / default / grub. Kamwe zvakare, iva nechokwadi chokuti une kodzero dzevatariri:
Iye zvino unoda kuchinja GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT uye GRUB_CMDLINE_LINUX kuti tadzivirire IPv6 pane boot:
Chengeta faira uye shandisa:
Izvo zvigadziri zvinofanira kunge zvino zvinoramba zvichidzoka pakudzoka.
Kudzorerazve IPv6 kuUbuntu
Kuti udzoke zvakare IPv6, iwe unofanira kuchinja mararamiro awakaita. Kuti uwane IPv6 kusvikira wadzorerazve, pinda:
Kana zvisina kudaro, kana iwe uchichinja /etc/sysctl.conf iwe unogona kana kubvisa mitsetse yawakawedzera kana kuchinja kwavari:
Iwe unogona kusarudza zvakare kuti udzoke zvakare mitemo iyi:
Iwe unofanirazve kuona zvakare IPv6 kero:
IPv6 Reenabled mu Ubuntu
Optionally, unogona kubvisa /etc/rc.local:
Kana iwe wakashandura kernel parameters in / etc / default / grub, endai mberi uye bvisai zvimwe zvingasarudzwa:
Munharaunda iyi ndakakupa nzira dzaungaita disable IPv6 pane Linux, pamwe nekukupa pfungwa pamusoro peiyi IPv6 uye nei uchida kuzvidzivirira.
Wakawana here nyaya ino inobatsira? Unodzivisa kuwirirana kwePv6 here? Regai tizive mubhuku rekunyorera!
Wedzera yako Linux server Internet kumhanya neTCP BBR kuzara kwekudzora
Nzira Yekugadzirisa Pamwe DNS Purogiramu Yevashandi neBIND pa Ubuntu 16.04
Maitiro ekuisa Odoo 10 pane Ubuntu 16.04 VPS
Gadzira Mail Server nePostfixAdmin pane Debian 9
Maitiro ekuchengetedza yako LAMP server